May 8, 2008, 5:29 am
အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်အားလုံးကို နာရီပိုင်းအတွင်း ဖြုတ်ခြွေဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းကို မြန်မာပြည်မှာ သေသေချာချာ အထူးသတင်းအဖြစ် ကြေငြာခြင်းမရှိခဲ့တာ အံ့သြရင်နာလို့မဆုံးပါဘူး။ ကျွန်မတစ်သက်မှာ ငယ်စဉ်အချိန်က တစ်မြို့လုံးရေအတိဖုံးလွှမ်းခဲ့ရပုံကို ကြုံခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတောင် အင်မတန်သွေးပျက်ထိတ်လန့်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒုက္ခအတိရောက်နေချိန် .. ကျွန်မတို့ ပဲခူးနယ်မြေအဲဒီလို ဖြစ်နေခဲ့တာ ဘယ်သူမှ မသိခဲ့ကြသလို သတင်းဌာနတွေမှာလည်း အထူးတလည်ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး … ။ လာရောက်လှူဒါန်းကြတဲ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း နအဖလူတွေလက်ထဲ အားလုံးလွှဲလိုက်လို့က လုံလုံလောက်လောက် လက်ထဲမရောက်ခဲ့ပါဘူး .. ။ အစားအသောက် ၊ ဆေးဝါး ၊ ကျန်းမာရေး အားလုံးဒုက္ခရောက်တာကို ကြုံဖူးသူမို့ အဆပေါင်းများစွာပိုဆိုးတဲ့ဒီမုန်တိုင်းဒုက္ခအတွက် အများကြီးကြေကွဲဝမ်းနည်းမိပါတယ် .. ။
မုန်တိုင်းအပြီး လူသေအလောင်းပုံတွေမြင်ရတိုင်း ရင်ထဲတစ်ခါဆို့နင့်မိတယ် .. ။ ဆိုးရွားလှတဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်လိုဒုက္ခဆိုးတွေကများ ထပ်မံဝင်ရောက်လာပါလိမ့် .. ။ သဘာဝဘေးအန္တာရယ်ကြီးကို မဖြစ်အောင် တားဆီးလို့မရပေမယ့် မိမိဘက်မှ ကာကွယ်နိုင်တာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရပါတယ် .. ။ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့အရေးတကြီးထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ၊ အသံ နှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှ သေသေချာချာ သတိပေးကြေငြာချက် ၊ သတင်းစားခေါင်းကြီးပိုင်းတွေမှာ ပြင်ဆင်သင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို အထူးဖော်ပြချက် .. အစရှိတာတွေလုပ်လို့ရပါတယ် .. ။ ဒါပေမယ့် … စစ်အာဏာရှင်အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး ဘာများဆောင်ရွက်နေကြလဲ နားမလည်နိုင်တော့ပါဘူး။
လူသေနှုန်းတွေ အနည်းဆုံး သောင်းဂဏန်းခန့် အရမ်းများပြားလွန်းချိန် အသက်ရှင်ကျန်ရှိနေသော ပြည်သူများ စားဝတ်နေရေးအတွက် အများကြီး ကူညီရပါဦးမယ် .. ။ အဲဒီအတွက် စစ်အာဏာရှင်တွေအားလုံးဘက်မှ လိုက်မကူညီနိုင်ရင်တောင် ဘေးကနေ ကူညီချင်လွန်းလို့ အာပေါက်အောင်ခွင့်တောင်းနေကြတဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းအကူညီကို ၀မ်းသာအားရလက်ခံသင့်ပါတယ် .. ။ ဒီအချိန်ဟာ အယူအဆတွေ ၊ နိုင်ငံရေးတွေ ၊ လူထုဆန္ဒတွေ ကောက်ခံစည်းဝေးနေရမယ့် အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေဆိုးကြီးကို အကောင်းဆုံးပြန်လည်ကယ်ဆယ်ရချိန်ပါ .. ။ မိမိဘက်မှ လိုအပ်နေချိန် သူများထံက အကူညီကို တောင်းယူရမယ့်အချိန်ပါ .. ။ အဖိုးတန်လှသော လူ့အသက်တွေအတွက် အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်မယ့်သူတွေ လာဖို့အရေး … ဗီဇာ … ဆိုတာကြီးနဲ့ အတင်းတံခါးပိတ်ထားနေပါလားနော် … ။
i lov ur heart . i know u hvasharp mind . that,s why i give u my respect nyi ma lay lin let kyal sin . .. thks ……
Comment by kokozaw May 20, 2008 @ 1:57 pm